Vhura Bhizinesi: Corporate Blogging | Martech Zone
Vhura Bhizinesi: Corporate Blogging
Mugovera, March 12, 2011 Svondo, October 19, 2014 Douglas Karr
Mangwanani ano, ndanga ndiine nguva inonakidza pane iyo Vhura Bhizinesi redhiyo show ne Trey pennington uye Jay Handler, vese vakurukuri vanobudirira uye vanachipangamazano vanobatsira mabhizinesi vanoenda nayo padanho rinotevera Musoro, hongu, waive Corporate Blogging!
Munguva yeratidziro, Dan Waldschmidt akabvunza mimwe mibvunzo inonakidza yandaida kugovana sezvo isu tisingakwanise kupinda mune yakanyanya kuwanda pane show:
Zvemukati zvakakosha zvakanyanya kupfuura kugadzirisa. Bvumiranai? Aihwa? - Mhinduro: Hongu… asi. Icho chikonzero nei ini ndichipedza nguva yakawandisa nevatengi mukugadzirisa ndeyekuita chokwadi chekuti vanoshandisa zvizere izvo zvavanonyora. Kutsvaga kwekutsvagisa kwakakosha nekuti ichave nechokwadi chekuti zvemukati zvichawanikwa pane zvekutsvaga. Shanduko yekushandura yakakosha nekuti ichapa nzira yevaverengi kutama kubva pakuverenga blog positi kuva mutengi mutsva. Zvakanakisa zvemukati chido kukunda uye kukuwanira mhinduro. zvisinei, hukuru hwekugadzirisa hunokwezva nekushandura vamwe vashanyi kuva vatengi.
Ndeapi ari epamusoro 4-5 matipi ebloggi? - Usatanga kusvikira iwe uine chokwadi chekuti wakazvipira uye unonunura. Izvi zvinoreva kuti une mamwe mablogging misoro, iwe unonyora zvinowirirana, uye iwe usamire. Usango dzoreredza zvekushambadzira - pindura mibvunzo iyo yako tarisiro uye vatengi vane hanya nezviri kubvunzwa nezvazvo. Tarisa yako tumira dhairekitori kune mamwe makuru emukati mazano. Ita shuwa kuti iwe une nzira yekudyidzana zvakadzama nemutengi wako - izvi zvinowanzoita kufona kuti uite muchibharo chepadivi icho chinonongedza papeji rekumhara neruzivo rwekufonera kana nhamba yefoni yekuita bhizinesi. Usasiye yako yekutsvaga optimization kune mukana - chikuva chako, dingindira, uye zvemukati zvese zvinofanirwa kuve zvakagadziridzwa kuitira kuti injini dzekutsvaga dzikwanise kuratidza izvo zvirimo uye iwe wozoguma mukutsvaga mitsva yemisoro inoenderana nebhizinesi rako.
Ko kupindura mibvunzo yavanotya kubvunza? Ndihwo hutungamiri chaihwo hwekufunga… Hongu, zviripo uye zvinotyaira masimba. Vanhu vakawandisa vanonyora mablog avo nezwi rakanyatso bland. Gakava uye kutendeseka zvinotyaira hurukuro uye zvinopa vaverengi chokwadi chekuti imi mose makatendeseka uye makasununguka. Izvi zvinosanganisira kunyora zvinyorwa nezve kukundikana kwako sekubudirira kwako. Isu tese tinoda kushanda nevanhu chaivo uye tinoziva kuti tese tinonetseka nguva nenguva. Kunzwisisa kuti kambani yako inokunda sei kutadza kunogona kutyaira yakawanda yakawanda tarisiro kune rako bhizinesi. Kutendeseka kunozorodza uye misoro yakaoma inotyaira masimba!
Gadzirira ku Vhura Bhizinesi Mugovera wega wega mangwanani pa9AM EST. Ndatenda Trey naJay!
Tags: Kugadziridza blogzvemukati optimizationjay mubatikuvhura bhizinesitrey pennington
Leaderpromos.com: Yakakura Yekusimudzira Zvigadzirwa, Yakakura Sevhisi!
Chiratidziro Chinoonekwa cheRuzivo: Omniture vs Webtrends
Mazano makuru. Zvaikurudzira kunzwa iwe uchigovera ruzivo rwako.
Zvinoshungurudza kuti vashoma sei "vanozviwana". Ramba wakadaro.
Yakatumirwa kubva ku iPad yangu